မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting semi Solid သေ China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:သတ္တု၏ပက်ဖျန်းတဲ့ Surface,မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Precision အစိတ်အပိုင်းများ,မဂ္ဂနီစီယမ် Automotive Casting Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > Precision Mg ကာစ် Die > မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting semi Solid သေ
Semi-အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဆေးထိုးသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်မှမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပူ ချ. semi-အစိုင်အခဲသေဆုံး, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားဆေးထိုးမှိုတန်ဆာအောက်, ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတိကျသောဖြစ်ပါတယ်။ အချောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နေကြပြီးပြီးနောက်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပက်ဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
မှုတ်လိမ်းအပူပေးပြီးအရည်ပျော်သည့်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်း, မြန်နှုန်းမြင့်ဝေဟင်နှင့်အတူအလွန်ချောမှုန်သို့လေပေါ်မှာနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မှာ workpiece ရဲ့မျက်နှာပြင်ကလေပေါ်မှာတစ်အပေါ်ယံပိုင်းဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထိုကဲ့သို့သော wear ခုခံ, ချေးခုခံ, ဓာတ်တိုးခုခံနှင့်အပူခုခံအဖြစ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြားဂုဏ်သတ္တိများအောင်မြင်ရန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။